Nanombohana ny fanangonan-tsonia: "Esory amin'ny famonoana ny mpamono afo ny 'famonoana Halloween'"
Home Vaovao momba ny fialamboly Vakiteny ny fanangonan-tsonia: “Esory amin'ny famonoana ny mpamono afo amin'ny 'famonoana Halloween'”
Vakiteny ny fanangonan-tsonia: “Esory amin'ny famonoana ny mpamono afo amin'ny 'famonoana Halloween'”
Misy aza ny fanangonan-tsonia momba io fanangonan-tsonia io.
by Timothy Rawles Oktobra 8, 2021
by Timothy Rawles Oktobra 8, 2021 51,606 hevitra
Toa tsy dia faly amin'ny zavatra vaovao indrindra ny olona sasany Halloween sarimihetsika tahaka antsika. Manokana, ny olona mahatsapa fa ny mpamono afo dia tokony hanana tsimatimanota amin'ireo mpamono olona misaron-tava izay manana hery mihoatra ny natoraly.
Jessie Streeter dia namorona fangatahana “hampitsahatra ny famonoana ireo mpamono afo” ao amin'ny petition.org Jona lasa teo. Vao haingana ny fanangonan-tsonia no nahazo vahana tamin'ny Internet ho andro fisokafan'ny Mamono ny Halloween manakaiky kokoa.
Nilaza i Streeter fa lasa mpamono afo izy ireo ary tsy fanajana ny famonoana olona iray, indrindra taorian'ny nanandramana namonjy ny ain'ilay mpamono olona. Ilay seho resahina dia azo inoana fa tamin'ny fiandohan'ny horonantsary rehefa Vehivavy farany Nentina tany amin'ny hopitaly i Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) taorian'ny nanapoahany ny tranony hamonoany an'i Michael Myers.
Avelao izy ireo hanazava izany amin'ny teniny manokana:
“Iriko ny seho amin'ilay sarimihetsika vaovao Halloween Kills izay anehoan'izy ireo ny famonoana ireo mpamono afo. Diso izany satria ny mpamono afo dia nofaohina handoro trano ary novonoin'olona namono. Ary tsy mety ny namonoan'i Mikaela ireo mpamono afo tamin'ny alàlan'ny fitaovana avy amin'ireo mpamono afo hafa novonoiny. Raha vao ho mpamono afo aho dia hitako fa tena manafintohina ary toy izany koa ny reniko sy ny dadako izay efa misotro ronono. Ka tiako ho esorina amin'ny sarimihetsika izany sehatra izany. Tsy voatery namono azy ireo tamin'ny fomba namonjen'izy ireo azy i Michael ka tokony hamonjy ireo mpamono afo roa ao an-trano izy ireo ary handeha hamono ny rahavaviny. Tsy misy antony an'io seho mahatsiravina io. Indrindra fa nitranga tamin'ny fiainana tena izy. Tahaka ny efa nolazaiko talohan'izay, ny mpamono afo dia namboarina haka trano afo ary novonoin'ny psycho sasany tamin'ny tena fiainana. ”
Ny fangatahana dia efa nahazo sonia 12 monja amin'ireo 100 tokony hasongadina ao amin'ilay tranonkala. Vao tsy ela akory izay ny sasany no namela ny heviny, nanesoeso ilay nanao fangatahana tamin'ny fampiantsoana anarana sy fiteny ratsy.
Nisy olona iray aza nanontany hoe: “Azontsika atao ve ny manomboka ny fanangonan-tsonia hamarana ity fanangonan-tsonia ity? Ity dia ambany noho Fitsanganana amin'ny maty amin'ny Halloween. "
Eny eny, raha ny marina dia misy iray. Mitondra ny lohateny: "Atsaharo ny fanangonan-tsonia hanafoanana ny famonoana ireo mpamono afo ao amin'ny Halloween Kills 2021," natombok'i Brandi Slavens ny alarobia lasa teo ho toy ny buzz ho an'ny Mamono ny Halloween mampiasa herin'ny mpankafy sasany.
Ity ny fiangavian'i Brandi:
“Vao tsy ela akory izay dia nisy fanangonan-tsonia iray natomboka tao amin'ny Change.org mba hanesorana ny famonoana ireo mpamono afo tamin'ny sarimihetsika Halloween vaovao, namono ny Halloween (namoaka ny 15 Oktobra 2021). Tiako hatsahatra izany satria saika ny olona rehetra nisy namono tamin'ny sarimihetsika mampihoron-koditra na oviana na oviana ... Raha ara-bakiteny dia tsy misy olona maratra amin'ny fanaovana an'ity sarimihetsika ity dia manome toky anao aho. Hadalana ny fanangonan-tsonia iray manontolo. Azoko antoka fa misy mpankafy Halloween marobe izay hanaiky. Hanampy ahy hitazona an'i Michael Meyers eo amin'ny sehatry ny fandraharahana…. Misaotra. ”
Koa lazao anay izay hevitrao momba ireo mpamaky malala rehetra ireo, ary ampahafantaro anay raha hahita ianao Mamono ny Halloween amin'ny teatra na alefaso amin'ny Peacock amin'ny 15 Oktobra 2021.